शहिदनगरका मेयर बरवरियाको सक्रियताले कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्ग हुदै - kshreereshwornath
शहिदनगरका मेयर बरवरियाको सक्रियताले कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्ग हुदै
धनुषा,०७७ साउन १३ गते ।
धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा सम्भावित जोखिम रहेको क्षेत्रमा कन्टयाक्ट ट्रेसिंङ्गको काम सुरु भएको छ ।
मेयर उदय बरबरिया यादवले कोरोनाबाट मृत्यू भएको व्यक्ति पसलको आसपासको क्षेत्रमा कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्ग सुरु गरिएको बताएका छन् ।
आइतवार मात्र कोरोना सँक्रमणले मृत्यू भएका कमला नगरपालिका वडा नं. ८ टेढामोड पसल सँचालन गर्दै आएको शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. ८ डुमरियामा कन्टयाक्ट ट्रयासिँग सुरु गरिएको छ ।
मेयर बरबरियाले आफू विहानैदेखि डुमरियामा कन्टयाक्ट ट्रयासिँगको लागि आएको टोलीलाई सहजता प्रदान गर्न उपस्थित भएको बताउँदै मृतकको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको कन्टयाक्ट ट्रयासिँग सोमबारदेखि नै सुरु गरिएको बताएका छन् ।
उनले शसस्त्र प्रहरीको कडा निगरानीमा उनको परिवारका सदस्यहरुलाई राखिएको बताउँदै उनले सँचालन गरेको पसल सहित उनको घरसम्मको कन्टयाक्ट ट्रयासिँगको लागि विज्ञ टोली डुमरिया आएको बताए ।
अहिले कन्टयाक्ट ट्रयासिँग गरी उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी ५ दिनपछि सबै जनाको स्वाब सँकलन गरी परीक्षण गरिने बताए । स्वास्थ्य शाखा, प्रशासन सम्मलित टोलीले कन्टयाक्ट ट्रयासिँगको कार्य सुरु गरेको उनले बताएका छन् ।
६ जना टेढामोड स्थित घरमै होम क्वारेन्टाइन, मृतकसँग उपचारको लागि सँगै गएका ३ जनालाई जनकपुरको गोपाल धर्मशाला क्वारेन्टाएन र बाँकी ४ जनालाई डुमरियामा होम क्वारेन्टाइन गरिएको हो ।
मेयर बरबरियाले भने, ‘अहिले शसस्त्र प्रहरीको कडा निगरानी राखिएको छ । उनको परिवारको १३ जनालाई घरबाट निस्कन दिएको छैन । अब ५ दिनपछि नै परीक्षण हुनेछ । तबसम्म स्थानीयहरुले पनि निगरानीमा राखेको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजको बदमासी, ५ दिनदेखि उपचाररत विरामीको रिर्पोट कोरोना पोजेटिभ आएपछि उपचार गरे बन्द
कोरोना संक्रमित परिवारका सदस्यले गाउँभर खाजा बाडेकाले ललियाका स्थानियबासिन्दा क्रसित, गाउँभर पिसिआर टेष्ट गर्न माग
गणेशमान चारनाथको एक उदाहरणीय काम, पालिकाले आफनै क्वारेन्टाइन भवन र वृद्धाआश्रम बनाउँदै
१८ दिनदेखि कोरोना अस्पतालमा उपचाररत्त ६० वर्षीय पुरुषको मृत्यु
शिक्षा पत्रकारको लेखनवृत्ति अभिमुखिकरणमा सातै प्रदेशका ८० पत्रकार प्रशिक्षित